ဒီကမ္ဘာကြီးမှာငါတို့ဟာ သားကောင်တွေဖြစ်တယ် | ဥက္ကာကိုကို
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာငါတို့ဟာ သားကောင်တွေဖြစ်တယ်	Posted by oakkarkoko on November 3, 2008
ဘယ်အီကွေတာမျဉ်းပေါ်မှာ ရပ်တည်နေခဲ့တာလဲ ……
ငါတို့ အံ့သြရတယ် ထိတ်လန့်ရတယ်
ငါတို့ ၀မ်းနည်းရတယ် အားငယ်ရတယ်
ငါတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်း ဘယ်ဆီမှာခညောင်းကုန်ပြီလဲ….
ရုရှားနဲ့ ဂျော်ဂျီယာ အရေးအခင်း
အမေရိကန်နဲ့ သမ္မတသစ် ဘားရက်အိုဘားမား
အီရန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နျူလက်နက်များ
အာဖဂန် ၊ တာလီဘန်နဲ့ စစ်သွေးကြွတွေ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘက်စုံထောင့်စုံ ယိုယွင်းလာမှုတွေနဲ့အတူ
ငါတို့အသိတရား ၊ ငါတို့ကျန်းမာရေးတွေ ယိုယွင်းလာခဲ့ရ။
ထမင်းစား ၊ ရေသောက် ၊ အလုပ်ကလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့
တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ၊ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့
လူရော အချိန်တွေပါ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးကြရတာ
ငါတို့ …. ပျော်သလား
နောင်လည်းဖြစ်ပျက်နေရမယ့် လောကဓံ + ကံကြမ္မာ ။
ယခုလက်ငင်း သက်ပြင်းတစ်စ ချပစ်လိုက်ပါ
“” လူဖြစ်ရတာ ငါတို့ ပျော်တယ် “” ။ ။
ဥက္ကာကိုကို Like this:Like Loading...
← တားမြစ်ချက်	အဖေ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...